10 ခုနှစ်တွင်စားသုံးသူခေတ်ရေစီးကြောင်း 2017 ... တစ် ဦး သတိပေးချက်နှင့်အတူ! | Martech Zone
10 ခုနှစ်တွင်စားသုံးသူခေတ်ရေစီးကြောင်း ... တစ် ဦး သတိပေးချက်နှင့်အတူ!
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2017 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ဖေဖေါ်ဝါရီလဆိုတာကျွန်တော်သိပေမယ့်လာမယ့်နှစ်အတွက်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးပါ။ ဒီသုတေသနအပေါ် GlobalWebIndex မှစားသုံးသူခေတ်ရေစီးကြောင်း စားသုံးသူအပြုအမူပြောင်းလဲမှုများ၏ခင်းကျင်းခြင်းနှင့်အတိုင်းအတာနှစ်ခုလုံးအတွက်မူးဝြေခင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ခေတ်ရေစီးကြောင်း 17 အစီရင်ခံစာ ပင်ဒီနှစ်ဒါခေါ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည် အခြေအနေပြိုကျ အဓိကကျတဲ့လူမှုမီဒီယာကနေမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေအထိသူတို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖြည့်စွက်နိုင်တယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်အသုံးပြုသူပျမ်းမျှအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ / စာတိုပေးပို့ရေးအကောင့်သုံးခုခန့်ရှိခဲ့သည်။ ယခုအရေအတွက်သည် ၇ ခုနီးပါးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအမျိုးမျိုးသောနှင့်အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများရောက်ရှိခြင်းသည်ကွန်ယက်များ၏လူမှုမီဒီယာနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံနေသည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ GlobalWebIndex လေ့လာသုံးသပ်သူ Katie Young
စာမျက်နှာ ၆၀ ပါအစီရင်ခံစာတွင် GlobalWebIndex ၏စီအီးအိုတွမ်စမစ်ကရေးသားခဲ့သည် ဒီခေတ်သတ်မှတ်ကြောင်းခြောက်လအဓိကခေတ်ရေစီးကြောင်း - နှင့်ကျွမ်းကျင်သူလေ့လာသုံးသပ်သူများက ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စောင့်ကြည့်ရန်အဓိကလမ်းကြောင်း ၁၀ ခုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။
မိုဘိုင်း - ပထမဆုံး မိုဘိုင်းကို ဦး စားပေးမထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အတူမိုဘိုင်း - ပထမဆုံးရှုခင်းသည်လျင်မြန်စွာချဉ်းကပ်လာသည်။ အဓိကအခွင့်အလမ်းများပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်လူငယ်စားသုံးသူများနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်း။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုဘိုင်း - အိန္ဒိယ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့သည်စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်အသစ်များဖြစ်လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
ဂိမ်းတိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ပို၍ နီးကပ်လာနိုင်သည်။ GlobalWebIndex ဒေတာကပြတယ် သုံးစွဲသူ (၄) ယောက်လျှင် (၁) ယောက်သည်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုလွန်ခဲ့သောလကကြည့်ခဲ့ကြသည်
Facebook က Marketplace - ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဈေးကွက်သည်ပေါင်းကူးတံတားကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည် သုတေသနနှင့်ဝယ်ယူမှုအကြားအစဉ်အမြဲ - ပစ္စုပ္ပန်ကွာဟမှု.
လူမှုရေးဗီဒီယို - တစ်ဦး ဗီဒီယိုပေါက်ကွဲမှု ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်မှုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိသည်။
အကြောင်းအရာစျေးကွက် - ကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်စားသုံးသူများသည်စွမ်းအားရှိကြသည် အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းဟာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ကြော်ငြာတွေအတွက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်သမားများနှင့်ကြော်ငြာသူများသည်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကိုယူရန်လိုသည် စားသုံးသူ - မောင်းနှင်သော၊ ပါဝင်သည့်စွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်းကမ္ဘာကြီးကိုယခင်ကထက်
မိုဘိုင်းကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်း - မိုဘိုင်းကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အာရှမှအနောက်သို့ပြန့်နှံ့သွားလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာမိုဘိုင်းကြော်ငြာများလိုအပ်လိမ့်မည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့စာတိုပေးပို့မှုနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ပါ.
virtual Reality Virtual Reality နှင့် Augmented Reality (VR & AR) သုံးစွဲသူများနှင့်ပြတ်တောက်သွားသောအခါမိုဘိုင်းသည်အဓိကအောင်မြင်သူဖြစ်လာနိုင်သည် - ၄၀ ရာနှုန်းသည် VR နားကြပ်ကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားကြပြီ
Snapchat - Snapchat မျက်မှန်များဖြင့်၎င်းခြေချောင်းကိုရေထဲသို့နှစ်ပြီးသောအခါ Snap သည်စတင်အသုံးပြုနိုင်သောဝတ်ဆင်နိုင်သောနည်းပညာပြောင်းလဲမှုကိုစတင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိရိယာသည်လူတို့၏ရှုမြင်ပုံကိုတုပသည့် ၁၁၅ ဒီဂရီမှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုသည်။
Consumer Trends 2017 ကို download လုပ်ပါ
Global Web Index အကြောင်း
GlobalWebIndex သည်လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်သောနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများနှင့်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများသို့နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ မှပရိသတ်များအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအင်တာနက်သုံးစွဲသူများ၏အပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အချက်အလက် ၈၅၀၀ ကိုဖန်တီးရန်ကုမ္ပဏီသည်ချိတ်ဆက်သုံးစွဲသူ ၁၈ သန်းကျော်ရှိသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ panel ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ တွစ်တာ၊ ဂူဂဲလ်၊ ယူနီလီဗား၊ ဂျွန်ဆင်နှင့်ဂျွန်ဆင်၊ WPP, IPG နှင့် Omnicom Group အပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်ပရိသတ်များ၏အပြုအမူများ၊ analytics GlobalWebIndex ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပြီးဒေတာ။
Tags: ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းarအကြောင်းအရာစျေးကွက်ဂိမ်းကစားခြင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာindiaအင်ဒိုနီးရှားတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်မိုဘိုင်းကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းပထမ ဦး ဆုံးမိုဘိုင်းဖိလစ်ပိုင်Snapchatလူမှုရေးဗီဒီယိုvirtual realityvr
ကမ်းခြေစာမျက်နှာများနှင့်သင်၏ Facebook ကြော်ငြာကင်ပိန်းမှအကောင်းဆုံးရယူနည်း